एक साताअघि साहित्यकार प्रगति राईको उपन्यास ‘बिर्सिएको मृत्यु’ प्रकाशित भयो । राईका केही शुभचिन्तक पाठकहरुले आफ्नी प्रिय लेखकको समाचार प्रकाशित नभएपछि हामीलाई फोन गरेर चासो राखे । एउटा लेखकप्रति पाठकले दिएको त्यो महत्वपूर्ण सम्मान थियो । र, त्यही सम्मानलाई पछ्याउँदै हामी प्रगति राईलाई भेट्न उनको घरसम्म पुग्यौं ।
-मैले सत्य कुरा बोलेकी हुँ । चर्चाका लागि त्यो कुरा गरेको थिइनँ । राजन मुकारुङसँग मेरो विवाह भयो, तर प्रेम हुन सकेन । २५ वर्षदेखि हामी श्रीमान–श्रीमती देखिन्छौं, तर सम्बन्ध प्रेमपूर्ण छैन । उनी आफ्नो बाटो हिँडेका छन्, मैले हिँड्न दिएकी छु । म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भने अरुलाई बाँध्नुहुँदैन । तर, मेरो एउटा भनाइ के छ भने श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रियो भन्दैमा श्रीमानका परिवारसँग पनि सम्बन्ध तोड्ने जुन चलन छ, त्यसको म विरोधी हुँ ।
-हामी सँगै छौं पनि, छैनौं पनि । उनी आफ्नी प्रेमीकासँग बस्छन्, तर बिहे गरेका छैनन् । मैले उनको घर सम्हालेकी छु । प्रेम गरेका हौ भने बिहे गर, प्रेमको इज्जत गर भनेर सम्झाउँछु । बरु छिमेकी भएर बसे पनि हुन्छ भन्छु । मानेका छैनन् ।
-राजन मुकारुङसँग मेरो विवाह भयो, तर प्रेम हुन सकेन । २५ वर्षदेखि हामी श्रीमान्–श्रीमती देखिन्छौं, तर सम्बन्ध प्रेमपूर्ण छैन । हामी सँगै छौं पनि, छैनौं पनि । उनी आफ्नी प्रेमीकासँग बस्छन्, मैले उनको घर सम्हालेकी छु
-धेरै महिलासँग सम्बन्ध राख्नु सायद पुरुषहरु सानको काम ठान्छन् क्यारे ! पुरुष अहंकार ! पिता–पूर्खाको विरासतले पनि काम गरेको होला । किनभने उनका जिजुवुवाका ९ श्रीमती थिए रे । हजुरबुवाले दुईटी विवाह गर्नुभएको थियो । तर, अरु पनि धेरै महिलासँग सम्बन्ध भएको कुरा घरमा सानका साथ कुरा हुन्थ्यो ।
उनका बुवाले पनि गर्भमै छँदा अर्की विवाह गरेर हिँड्नु भएको थियो रे । हाम्रो समाजमा त्योबेला यस्तो काम गर्नुलाई गौरव मानिन्थ्यो । अहिले बहुविवाह गर्न पाइँदैन । तर, प्रेमका नाममा सँगै बस्न पाइन्छ ! सायद यही काम गरेका होलान् ।
-मलाई थाहा छ, प्रेम एक्लै आउँदैन । प्रेमको सिंगो प्याकेटभित्र केवल प्रेम मात्रै हुँदैन । प्रेमसँगै अधिनायकवाद आउँछ । प्रेमसँगै दायित्व, घुर्की, दासता, अनिच्छित यौन र आर्थिक समस्याहरु पनि आउँछन् । कविको कल्पनाजस्तो वा कुनै अदर्श सिद्धान्तजस्तो मुलायम र कल्काउँदो मुना भएर प्रेम बसिरहँदैन । छिप्पिदै गएपछि यसमा काँडा उम्रन थाल्छ र घोच्न थाल्छ ।
-अर्थ छैन भनिहाल्दिनँ । अरुका लागि अर्थ होला । मेरो जीवनमा त्यो भएन ।
-सायद । यसको अर्थ, म रुख्खा–सुख्खा महिला होइन । हेर्नुस्, यी कुरा गर्दा मेरा आँखा भिजिरहेका छन् ।
-म दुई दाजु र दुई दिदीपछिकी सन्तान हुँ । मपछि एउटी बहिनी पनि जन्मिइन् । मेरा बुवा हास्यरसले भरिपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । आमा भने तार्किक कुरा गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, बुवाको हास्यरस र आमाको तार्किकताले मेरो आजको लेखक व्यक्तित्व जन्मिएको हो । मलाई माइतीमा निकै स्वतन्त्रता थियो । एकप्रकारले लाड–प्यारले हुर्किएकी हुँ । ८ वर्षको उमेरमा मात्र मलाई स्कुल भर्ना गरियो । तर, म घरमै लेखपढ गर्न जान्ने भैसकेकी थिएँ ।
-म खोटाङ्को एउटा दुर्गम गाउँकी छोरी हुँ । गाउँमा ७ सम्मको मात्र स्कुल थियो । त्यो पास भएपछि म एकैपटक ९ कक्षामा नाम लेखाउन चाहन्थेँ । तर, पासआउट भएर नयाँ विद्यालय जाँदा गाउँमा जस्तो माथिल्लो कक्षामा राख्न मान्नुभएन । गाउँकै हेडसरले नै पत्र लेखेर त्यसो नगर्न अनुरोध गर्नुभएको भन्ने कुरा गर्नुभयो । मलाई निकै चित्त दुख्यो । त्यसपछि स्कुल नै जान छाडिदिएँ ।
-हो । तर, मेरो जीवनमा अर्कै कथा लेखिँदैछ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा भएन ।
-मेरी एउटी साथी थिई दीपकला । उहाँकी फुपू भोजपुरको दिल्पामा हुनुहुन्थ्यो । उसले एक दिन आफ्नी फुपूको घर जान आग्रह गरी । मैले मानिनँ । उसले खोटाङ र भोजपुरको सीमानामा रहेको डाँडोसम्म जाउँ, त्यहाँबाट साह्रै राम्रो दृश्य देखिन्छ भनेर फकाई । हामी घरबाट हिँड्यौं । त्यहाँ पुगेपछि उसले फुपूको घर पनि पुगिहालौं न त भनेर आग्रह गरी । घर फर्कने अवस्था थिएन । म उसको पछि लागेर दिल्पा पुगेँ ।
-खासमा दीपकलाले मेरा बारेमा आफ्नी फुपूलाई निकै कुरा गरेकी रहिछ । उनका कान्छा छोरा राजन मुकारुङ अलि अल्लारे टाइपको केटो भएकाले उसको विवाह यही केटीसँग गर्ने हो भने उसले सुधार्छे भन्ने उहाँको धारणा रहेछ ।
-नौ कक्षामा नाम लेखाएर पढ्न थालें । कविता प्रतियोगिताहरुमा प्रथम आउँथे । मेरो प्रगति देखेर सबै खुसी थिए । तर, हामी दुबै १५–१६ वर्षे अल्लारे थियौं । विवाहपछि कसरी सुरक्षित यौनसम्पर्क राख्ने भन्ने थाहा थिएन । हुन त सासू आमा गाउँकी स्वास्थ्य परिचारिका हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले सुरक्षित कसरी रहने भनेर सिकाउनुभएन । परीक्षा दिने बेलामा म गर्भवती भएँछु । अचानक पढाइ छाड्नुपर्‍यो ।
-हामी साथीजस्ता मात्रै थियौं । एउटा छोरा जन्मिएपछि किन एउटा मात्रै, भोलिको के भरोसा ? दुईटा बनाउनुपर्‍यो भन्ने मेरो मनमा आयो । त्यसपछि अर्को बच्चा भैहाल्यो । jlचरा राजनलाई पनि थाहा भएन होला ।
-म पो महिला थिएँ र मेरा सन्तानका कारण मेरो पढाइ रोकियो । राजन त एसएलसी पास गरेर काठमाडौं आइहाले । उनी पनि पहिलेदेखि लेख्थे । तर, काठमाडौं आएपछि उनको लेखन सायद बढ्दै गयो । एक दिन मेरी आमाले खोटाङबाट के खबर पठाउनुभयो भने, ‘तैंले पढाइ छाडेर छोराहरु हुर्काइरहेकी छेस् । तेरो श्रीमान् पढेर विद्वान हुँदैछ । तैंले यसरी पढाइ रोकिस् भने भोलि तेरो र श्रीमानको स्तर मिल्दैन । उसले अर्को विवाह गर्छ । तँ न यताको हुन्छेस्, न उताको हुन्छेस् । बरु छोराहरु लिएर माइत आइज, म तेरा छोराहरु हुर्काउँछु ।’
-एक वर्ष पनि माइतीमा टिक्न सकिनँ । स्कुलमा जाँदा आफूभन्दा जुनियरसँग पढ्नु पर्दथ्यो । उनीहरु मलाई जिस्क्याउँथे । त्यहाँसम्म ठिकै थियो, तर शिक्षकहरु नै मुटु दुख्नेगरी भन्थे, ‘पढ्नेबेलामा पोइला गई, अहिले पढाएको कुरा बुझ्दिन भन्छे ।’
-होइन । छोराहरुलाई घरमा छाडेर म पनि कलेज पढ्न काठमाडौं आएँ । काठमाडौंमा संगै बसियो । तर, राजन अलि अल्लारे टाइपको मान्छे, त्यसमािथ तत्कालीन सरकार विरोधी र माओवादी पक्षधर । उसको आस्था थाहा पाएपछि मानिसहरु उसलाई काम दिन डराउँथे । मैले शिक्षण पेशा गरेर छोराहरु पालेँ । उनी कविता लेख्ने र साहित्यिक आन्दोलनमा लागे । यसरी फरक शैलीले हाम्रो आ–आफ्नो जिन्दगी अघि बढ्न थाल्यो ।
-घरमा लेख्ने वातावरण नै थिएन । स्कुलमै हुँदा लेख्थेँ । जागिर खाँदै ‘वादी विज्ञप्ति’ का कविताहरु लेखेकी हुँ र संग्रह पनि निकालेकी हुँ । कविता लेखेका कारण मैले विद्यालयमा धेरै गाली पनि खाएकी छु । बोर्डिङ् स्कुलमा अंग्रेजी लेख्ने बोल्नेलाई महत्व दिइन्थ्यो, नेपाली कविता लेख्नेको इज्जत हुने कुरै भएन । तै पनि लेख्न छाडिनँ ।
-कोरिया गएकी थिएँ । करिब साढे चार वर्ष बसेँ । पैसा कमाउने बाध्यता पनि थियो । कोरियन भाषाको शिक्षक भएर काम गर्दागर्दै उता जान मन लाग्यो र गएँ । ‘लेखककी स्वास्नी’ उपन्यास मैले कोरिया बसेरै लेखेकी हुँ ।
-खासै योगदान छैन भन्दा अन्याय हुँदैन होला । यसको अर्थ, उनले असहयोग गर्थे भन्ने होइन । उनले मेरो लेखनको विषयवस्तु रुचाउँथे, रुचाउँछन् । लेखनको हकमा हामी एकअर्काका शुभचिन्तक हौं ।
-म पनि उनलाई लेख्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्थेँ । उनी लेखक भएकैले अल्लारे भएर हिँडेका हुन् भन्ने महसुस गर्थे । त्यही भएर पनि स्वतन्त्र छाडेको हुँ । म कोरिया गएपछि तिमी केही काम नगरी लेख, चाहिएको पैसा म पठाइदिन्छु भन्थेँ । नभन्दै म विदेशीएकै बेला उनले ‘दमिनी भीर’ लेखे र त्यसले मदन पुरस्कार पनि पायो । यसअघि उनको ‘हेत्छाकुप्का’ उपन्यास प्रकाशित भएको थियो ।
-प्रसंसा गर्छु । लेखक राजन मुकारुङ साह्रै सुन्दर लेख्छन् । मैले चिनेदेखि नै उनले किरातका लुकेका कुरा बाहिर ल्याउने, त्यसमा बहस गर्ने उनी एक्ला व्यक्ति हुन् । पछि उपेन्द्र सुब्बाहरु थपिए । खासमा सिर्जनशील अराजकताले मूलधारको भनिएको खस आर्य र पछाडि पारिएका जात–जातिका भाषा साहित्यका बीचमा पुलको काम गर्ने, ती विषयमा बहस गराउने काम गरेको छ । उनी र उनका साथीभाइहरु लगातार यो काममा लागिरहेका छन् ।